Ungahlela Kanjani Iwebhusayithi Yakho Entsha | Martech Zone
Ungahlela Kanjani Iwebhusayithi Yakho Entsha
NgoLwesithathu, ngoMashi 5, 2014 NgoLwesithathu, ngoMashi 5, 2014 Douglas Karr
Sikhona sonke… isayithi lakho lidinga ukuvuselelwa. Kuphakathi kokuthi ibhizinisi lakho seliphinde laqanjwa kabusha, isayithi seliyindala futhi lidala, noma limane nje aliguquli izivakashi ngendlela olidinga ngayo nawe. Amaklayenti ethu eza kithi ukuzokwengeza ukuguqulwa futhi imvamisa kufanele sithathe isinyathelo sibuyele emuva futhi sithuthukise konke okukhona kubo bewebhu kusuka ekushintsheni uphawu kuya kokuqukethwe. Sikwenza kanjani lokhu?
Iwebhusayithi ihlukaniswe yaba ngamasu ayisihluthulelo ayi-6, okufanele anikezwe imininingwane ukuze wazi ukuthi uvelaphi nokuthi yiziphi izinhloso zakho:
Ipulatifomu - yibuphi ubuchwepheshe obusetshenziswayo, ukubamba, amapulatifomu, njll.
Ubukhosi - isayithi lakho lihlelwe kanjani.
Okuqukethwe - yiluphi ulwazi oludinga ukwethulwa nokuthi kanjani.
Abasebenzisi - ngubani ongena kusayithi nokuthi kanjani.
Izici - yiziphi izici ezidingekayo ukuguqula amakhasimende kahle.
Kukhuluma - ulinganisa kanjani impumelelo yakho noma izindawo zokwenza ngcono.
Manje kukhona ubukhulu obuhlukile kusayithi nokuthi bahlanganiswa kanjani namasu akho wokumaketha edijithali. Isayithi elisha lihlangabezana kanjani nalezi zindlela:
Brand - ukubukeka, imizwa, imibala, amafonti, ukwakheka, amagama, njll. Ezichaza isiza.
Izingcingo ezizosebenza - yiziphi izindlela zokuguqulwa futhi abantu bazofika kanjani lapho?
Amakhasi okufika - Abantu bazoguqula kuphi futhi liyini inani lalokho kuguqulwa? Ingabe kukhona ukuhlanganiswa kweCRM noma Marketing Automation okudingekayo?
Okuqukethwe - Imininingwane yencwajana, imininingwane yenkampani, abasebenzi, izithombe, izethulo, imidwebo yolwazi, amaphepha amhlophe, ukukhishwa kwabezindaba, izicelo zedemo, izimo zomsebenzisi, ukulandwa, ama-webinars, amavidiyo, njll.
imeyili - abantu babhalisela kuphi, ukuphatha kanjani okubhaliselwe nemithetho ye-SPAM.
Ukucinga - ipulatifomu, ucwaningo lwamagama asemqoka, ukwakhiwa kwamakhasi, izincomo zokuqukethwe, njll.
Social - Amazwibela, izinkinobho zokwabelana kanye nezixhumanisi zokuya emphakathini kufanele kuhlanganiswe futhi kuthuthukiswe kuyo yonke indawo.
QAPHELA: Ngokusebenzisana okuthuthukile, sebenzisa iklayenti lethu ithuluzi lokwakha izingqondo ukwenza imephu nokuguqula ubukhosi kanye nezinqubo zokugcina kulula futhi uhlele wonke umsebenzi ngaphakathi kokuchofoza okungu-2-3 kokungena kusayithi.
Ngaphakathi kwalawa maqhinga, ithini imininingwane
Yenzani isayithi njengamanje oyidingayo qhubeka wenze?
Yini indawo yamanje engakwenzi lokho isiza esisha okumele ukwenze?
Yini indawo yamanje engakwenzi lokho kungaba kuhle ukukwenza esizeni esisha?
Ngayinye yalezi zindlela, thuthukisa izindaba zomsebenzisi kubasebenzisi ngamunye nokuthi basebenzisana kanjani nesayithi. Bahlukanise phakathi okumele bakwenze futhi kuhle ukukwenza. Indaba yomsebenzisi incazelo ecebile yokuthi umsebenzisi uxhumana kanjani futhi angasetshenziselwa ukuhlolwa kokwamukelwa. Nasi isibonelo:
Umsebenzisi uyakwazi ukungena ngemvume ngegama lomsebenzisi nephasiwedi, abhalisele isayithi, futhi abuyise iphasiwedi yakhe uma engaziwa. Ukubhalisa kudinga igama lomsebenzisi, igama eligcwele, ikheli le-imeyili nephasiwedi eqinile (inhlanganisela yamacala amancane, ongaphezulu, izinombolo nezimpawu). Ukuqinisekiswa kwe-imeyili kufanele kufakwe ukuqinisekisa ukuthi ikheli le-imeyili elivumelekile liyasetshenziswa. Umsebenzisi kufanele akwazi ukuguqula iphasiwedi yakhe nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kokuxhaswa.
Manje sesingena esimeni esihle ... unemininingwane yesayithi lakho, ukuthi abasebenzisi basebenzisana kanjani nalo, kanye nezidingo zesiza esisha kanye nezidingo. Ukuthuthuka kokuphindaphindeka kubalulekile - beka phambili izici nezindaba zomsebenzisi ukuze wazi ukuthi yini okufanele yenziwe kuqala ngalokho okuhle onakho. Qala ukucabanga ngezinhloso nezinsizakusebenza ukusetha okulindelekile kokudingayo nokuthi ukudinga nini.
Yokusungula isiza samakhasi. Imvamisa, sisebenzisa iscraper ukwenza lokhu kube lula.
Ngekhasi ngalinye, chaza ukuthi hlobo luni lwekhasi ithempulethi kuzodingeka ukubonisa kahle ikhasi.
Develop ama-wireframes ukunquma ukwakheka kwamakhasi nokuzula.
Uma ukubalwa kwamakhasi kuzoncishiswa (kuvame ukunconywa), uzokwenzaphi ukuqondisa kabusha amakhasi akhona ukuze ungaphazamisi abasebenzisi nokusesha? Imephu wonke amakhasi wamanje nezindawo ezintsha.
Thuthukisa okuqukethwe ukufuduka hlela ukufaka wonke amakhasi akhona ezakhiweni zamakhasi amasha nge-CMS entsha. Lokhu kungaba budedengu… kudinga umfundi ukuthi akopishe futhi anamathisele. Noma kungaba ukuguquguquka kwedatha okuyinkimbinkimbi okubhalwe ukungenisa imininingwane.
Yakha i-matrix ye abasebenzisi, iminyango, ukufinyelela nezimvume ngekhasi nenqubo. Hlukanisa nesidingo sokuba nakho nokuhle ukuba nakho.
Yakha uhlelo lwakho
Yonke into yesenzo kufanele ibe no-who (onesibopho), yini (okwenziwa ngokuningiliziwe), kanjani (ngokuzithandela), nini (usuku olulinganiselwa ukuqedwa), ukuncika (uma omunye umsebenzi kufanele wenziwe kuqala), nokubekwa phambili (kuhle ukuba nakho , ngifuna ukuba).
Yazisa abasebenzisi futhi uthole isivumelwano sabo ngemisebenzi nangezikhathi.
Vumelana nezimo ngezinsizakusebenza zesibili, ama-workaround, nokwenza kabusha phambili.
Yiba nomphathi wephrojekthi ophakathi nendawo olandelela, uvuselele futhi abike nsuku zonke.
Yakha amabhafa phakathi kokubuyekezwa kwamakhasimende nezinsuku zakho zokuphothula nesikhathi esiningi sokwenza ukuguqulwa noma ukulungiswa. Uma kwethulwa izici ezintsha (i-scope creep), qinisekisa ukuthi iklayenti liyabona ukuthi imigqa yesikhathi ingathinteka kanjani nokuthi yiziphi ezinye izindleko ezingaba khona.
Khombisa iklayenti endaweni yesiteji bese udlula kuyo izindaba zomsebenzisi ukwamukelwa.
Hlanganisa analytics kuyo yonke indawo yokulandela ngomcimbi, ukuphathwa komkhankaso kanye nesilinganiso sokuguqulwa.
Uma usamukele, beka isayithi bukhoma, uqondise kabusha ithrafikhi yakudala uye ku- new. Bhalisa isiza nabaphathi beWebhu.
Thatha isifinyezo samazinga futhi analytics. Faka inothi ku-Analytics ngosuku okwashintshwa ngalo isayithi.
Yenza uhlelo lwakho! Lapho isiza sesilungile
Isipele isayithi yamanje, i-database kanye nanoma yiziphi izimpahla ezidingekayo.
Nquma i- uhlelo lokuphikisana ngoba lapho izinto zingahambi kahle (futhi zizokwenzeka).
Luhlelo usuku / isikhathi 'sokuya bukhoma' sesayithi lapho abasebenzisi bengathintekanga khona okuncane.
Qiniseka ukuthi abasebenzi abalulekile bakhona yaziswa uma kukhona iwindi lapho isayithi lingatholakali khona - kufaka phakathi amaklayenti.
Yiba khona uhlelo lokuxhumana endaweni ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uyatholakala ngocingo noma ngengxoxo.
Faka isiza esisha siphile.
test izindaba zomsebenzisi aphinde.
Ukwethulwa kwesiza akusona isiphetho. Manje kufanele uqaphe isikhundla, abaphathi bewebhu kanye analytics ukuqinisekisa ukuthi isiza senza njengoba ubuhlelile. Bika njalo emavikini amabili amasonto ayisithupha kuye kwayisishiyagalombili ngentuthuko. Yenza izinhlelo bese ubuyekeza amaphrojekthi ngokufanele. Ngikufisela inhlanhla!
Tags: Isipeleuhlelo lokuxhumanaukufudukaukuhlela indawo entshaplanUkuhlelaisipele sesayithiukufuduka kwesizaizindaba zomsebenzisidesign webuhlelo lokwakhiwa kwewebhui-wireframe
Amathrendi aphezulu azokwakha ukumaketha kwedijithali
Abesilisa vs. Abesifazane Ukuthengwa Kwe-Inthanethi
Mar 12, 2014 ku-7: 21 AM
Ukuwohloka okuhle kokuhlela indawo! Ngayinye yalezi zindawo ngokuqinisekile ivumela ingxoxo eyengeziwe.
Lokhu kungakuhle ochungechungeni… .ngokukhulu!
Mar 12, 2014 ku-2: 48 PM
Asikwenze! Mhlawumbe i-infographic nephepha elimhlophe elibhalwe ngokubambisana?